Octopus salpicón, oo ah cunto aad u cusub oo hodan ah | Cuntooyinka Jikada
Montse Morote | 19/08/2021 09:00 | Ensaladas, Bilowga Qabow
Octopus salpicón, bilaw macaan oo cusub si aad cunto u bilowdo. Cunto aan ka tagi karno hore u sii diyaarsan ama aan qaadanno. Saldhigga salpicón waa khudaar cusub, cayriin iyo noocyo kala duwan ah, aad loo jarjaray qaybo yaryar oo ay weheliyaan borotiin kasta, taas oo kiiskani yahay octopus iyo xawaash.
Waa bilow aad u wanaagsan, waxaa la socon kara qaar ka mid ah cawska, tuna…. Khudaarta waa inay noqotaa mid aad u cusub, maadaama markii la cunay cayriin ay tahay inay fiicnaato.
Qadarka maaddooyinka ayaa kala duwanaan kara dhadhanka, waa sida salad.
Oktoobar la kariyey 1-2 lugood
1 basal ama basal guga
Wixii vinaigrette ah
Paprika macaan ama kulul
Si loo diyaariyo salpicón octopus waxaan ku bilaabi doonnaa dhaqidda iyo diyaarinta waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Waxaan jarjarnay dhammaan khudaartii qaybo. Basbaas cas, basbaas cagaaran iyo basal. Waxaan ku ridnaa il ama baaquli.
Marka xigta waxaan jarjarnaa yaanyada iyo octopus. Waxaan yareeynaa yaanyada, waad ka saari kartaa miraha haddii aadan jeclayn. Octopus -ka waxaa loo jari karaa xaleefyo ama qaybo yaryar. Waxaan ku darnaa dhammaan kuwa kor ku xusan.
Waxaan isku qasnaa wax walba saxan. Haddii aynaan cunin xilligan, waxaa lagu ridi karaa qaboojiyaha si wax walba loo gooyo iyada oo aan la xidhin. Waxaan ku diyaarinnaa vinaigrette baaquli, ku dar 4-5 qaado oo saliid ah, 2 khal, milix yar iyo paprika, garaac oo isku qas. Waxaan kaydsanaa ilaa waqtiga adeegga.
Waqtiga u adeegidda waxaa lagu ridi karaa ilaha sida salad ama taargooyinka shaqsiga ah oo waa la kariyaa.
Waxaan u adeegi doonnaa mid aad u cusub oo ay weheliso vinaigrette iyo waxoogaa yar oo paprika ah oo loogu talagalay kuwa doonaya inay wax badan u adeegaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Asxaabta » Bilowga Qabow » Octopus salmigundi